Wepụta $ 299 ma nyefee saịtị gị na Yahoo? | Martech Zone
Nwere ike iji ịkpachara anya mgbe ị na-eji ụfọdụ usoro ọkọlọtọ ntanetị SEO na ịgụ ụfọdụ forums ka ị ga - esi bulie ọkwa, ikike na backlinks na saịtị gị… ụfọdụ ozi a agafela oge.
Dị ka ihe atụ, Agụrụ m na saịtị ole na ole na-enyefe saịtị gị na ndekọ aha Yahoo! Bụ ezigbo echiche. Maka $ 299, a ga-edepụta saịtị gị n'ime Yahoo! azụmahịa directories, na-akwalite na Yahoo ndekọ na peeji nke maka otu ụbọchị, ma eleghị anya, ụfọdụ anya site na saịtị ndị ọzọ na-ahụ Yahoo! dị ka ikike.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ngwa ngwa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-anọchi anya ịrị elu nke okporo ụzọ m natara maka ịzụta the na-ezighi ezi. Nke ahụ bụ okporo ụzọ tupu M debara aha saịtị ahụ na Yahoo! Ọ na-agbadata na Yahoo! nyocha okporo ụzọ kemgbe ahụ.
Ikekwe ndị mmadụ anaghị ahụ Yahoo! dị ka onye ikike ọzọ (ụfọdụ sarcasm… M ji obi eziokwu na-atụ anya a obere otu okporo ụzọ). N'ụzọ dị mwute, okporo ụzọ m si na Yahoo! 'S search engine dị na a nkwụsi ikeMana ekele (nza nke mkparita ebe a), Ndị ọbịa 17 bịara na saịtị m site na akwụkwọ ndekọ aha Yahoo na ụbọchị 60 gara aga. Ọ bụrụ na nke ahụ na-aga n'ihu, nke ahụ ga-abụ ihe dịka ndị ọbịa ọhụrụ 100 nke ga-abịa na blọọgụ m n'afọ na - esote - na - akwụ ụgwọ ihe dịka $ 3 ọ bụla.
Na-esote? Ọkacha mma na Weebụ… Ozugbo m nwere ike imeli ya ($ 99 ugboro) na Business.com maka $ 299 ọzọ kwa afọ.
Tags: 1zụ ahịaokwukwoNweta azịzaOzi EsereseKpọtụrụJonatanMadmimi
Hey Doug daalụ maka igosipụta nke ahụ maka m, m na-eche ime otu ihe ahụ. Echere m na m ga-echebara nke ahụ maka onwe m ma ọ bụ ndị ahịa SEO m.
Echere m na esemokwu ahụ bụ na Yahoo bụ ndekọ ego akwụ ụgwọ na ọ bụghị nke nweere onwe ya? Noboody nwere mmasị ịhụ onye zụrụ ụzọ ha gaa n'elu. Ọtụtụ oge ndị mmadụ na-achọ naanị iji nweta ỌZỌ backlinks mana ọ dị mkpa karịa na-eburu n'uche agbataobi ha na-abịa na ndekọ ego akwụ ụgwọ anaghị adịkarị mma. Naanị ihe ọzọ m nwere ike iche bụ mgbe ị gbakwunyere ndepụta Yahoo gị, ị lekwasịrị anya na isiokwu gị na ihe ịsọ mpi na ọdịdị karịa ndepụta gị gara aga. Nke ahụ ga - eme ka ị bụrụ onye egwuregwu n’egwuregwu egwuregwu buru ibu mana ọ ga - agbada n’ihu elu.
Jun 11, 2009 na 8:26 AM
Have nwere ntuli aka m, Mr! Ajuju adighi…
Jun 11, 2009 na 10:11 AM
Anaghị m ekwenye na gị, mana na nke a, m ga-ekwenye. Ruo mgbe Google na-adịbeghị anya, ebe ahụ ụkpụrụ nduzi webmaster na-atụ aro ka ị nweta ndepụta na Yahoo! ndekọ weebụ. Ebumnuche ha wepu ya abụghị B because n'ihi na o nweghị uru, mana na ha ahụghị mkpa ọ dị ị tụọ aro ahụ.
Ọ bụrụ n’ị na-elekwasị anya na okporo ụzọ sitere na ndepụta ahụ, ị ​​na-efu uche. Dị nnọọ ka ọ bụla njikọ, na saịtị ọ bụla, ọ bụchaghị na ịchọrọ okporo ụzọ site na njikọ ahụ, kama ịchọrọ ịwelite ogo gị maka otu isiokwu.
Ọ bụrụ na ikike sitere na njikọ ndị a bara uru - gịnị kpatara na ị gaghị akwụ $ 99 ma ọ bụ $ 299 maka ya? Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịmalite ọnụọgụ nke njikọ gị na saịtị gị - gịnị kpatara na ị gaghị ele anya nke a dị ka nhọrọ? Ọ bụrụ na mmadụ ebe ịde blọgụ maka ịnyefe kọfị kọfị Starbucks ọ bụrụ na mmadụ elee ngosi, wee jikọta ya na-enye ha azụ na saịtị ha… abụghị nke a karịa ọnụ karịa Yahoo! ndekọ?
Jun 11, 2009 na 10:57 AM
Anọ m na-atụ anya ịrịọ azịza ụfọdụ site na ụfọdụ uru na ụlọ ọrụ ahụ. Are na-eme ezi - ọ bụ ihe niile nke nloghachi na ego. Ọ bụrụ na ndị ọrụ 17 ahụ rụpụta $ 600 na ego ha nwetara, ọ nweghị nsogbu. Mana anaghị m ekwu maka nleta ebe a, ana m ekwu maka SEO pros na-agwa ndị folks debanye aha na ọrụ ndị a iji wuo ikike.
M ghọtara na m bụ naanị otu saịtị, ma ole na ole ndị ọbịa, a dobe na okporo ụzọ, enweghị abawanye na pagerank, ọ dịghị Google alerts maka ọhụrụ backlinks hụrụ… niile na-eduga m ikwere na ọ dịghị ihe mere ime nke a ọzọ. Ebee ka m gahiere?
PS: Starbucks… ị na-atọ ọchị!
Naanị m na-eji Google dị ka igwe nyocha m nwere ikike maka ịlele ọkwa nke saịtị m.
Yahoo na MSN anaghị agbanwe agbanwe na ọkwa ha.